Kuboshwe abane ngelokuhlasela epulazini lase-Free State | News24
Kuboshwe abane ngelokuhlasela epulazini lase-Free State
Bloemfontein – Kuboshwe abasolwa abane ngesigameko sokuhlasela epulazini laseFree State, kubika iAfricaNewsAgency.
NgoLwesibili uphiko loKlebe kanye nethimba le-Bloemfontein Tactical Response babophe amadoda aseminyakeni ephakathi kuka-33 kuya ku-47 ubudala.
Okhulumela amaphoyisa uConstable Peter Kareli uthe amaphoyisa agasele epulazini laseJagersfontein lapho kutholakale amadoda amane ezifihle endaweni yokugcina impahla elinde ukuhlasela umnikazi wepulazi nomndeni wakhe.
OLUNYE UDABA:Bacishe bashisa ipulazi kutholakala izinkomo zifile
“Abasolwa baboshwe nenqwaba yezibhamu ezingenazo izinombolo, endaweni yokugcina impahla engamamitha angu-250 nendlu enkulu. Amaphoyisa athathe amabhalaklava alawamadoda, ummese, iphanga kanye nendophi,”kusho yena.
“Abasolwa basuka eBotshabelo kanti bonke babekwe amacala okubopha itulo lokubulala kanye nokugebenga kanye nokuphatha izibhamu neziqhumane,”kusho yena.